परमेश्‍वर र मानिसलाई समान शब्दहरूमा व्यक्त गर्न सकिंदैन। उहाँको सार र उहाँको कार्य मानिसका लागि अति नै अथाह र बुझ्नै नसकिने हुन्छन्। यदि परमेश्‍वरले व्यक्तिगत तवरले आफ्नो कार्य गर्नुहुन्न र मानिसको संसारमा उहाँका वचनहरू बोल्नुहुन्न भने, मानिसले कहिल्यै पनि परमेश्‍वरको इच्छा बुझ्न सक्ने थिएनन्। अनि यसैले, आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परमेश्‍वरमा समर्पण गर्नेहरूले पनि उहाँको अनुमोदन प्राप्त गर्न सक्ने थिएनन्। यदि परमेश्‍वरले कार्य गर्न लाग्नुहुन्न भने, मानिसले जति नै राम्रो गरे पनि त्यो सब व्यर्थको हुनेछ, किनकि परमेश्‍वरका विचारहरू सधैं मानिसका विचारहरूभन्दा उच्च हुन्छन्, र परमेश्‍वरको बुद्धि मानिसको समझभन्दा धेरै परको हुन्छ। र यसैले म भन्छु कि जसले परमेश्‍वर र उहाँको कार्यलाई “पूर्ण रूपमा बुझेको” दाबी गर्छन् तिनीहरू धेरै अयोग्य छन्; तिनीहरू सबै आफैमा अति विश्‍वस्त र अनभिज्ञ छन्। मानिसले परमेश्‍वरको कार्यलाई परिभाषित गर्नु हुँदैन; अझ भन्ने हो भने, मानिसले परमेश्‍वरको कार्यलाई परिभाषा गर्न सक्दैन। परमेश्‍वरको नजरमा, मानिस कमिलाजस्तै महत्त्वहीन छ; त्यसैले मानिसले कसरी परमेश्‍वरको कार्यलाई बुझ्न सक्छ? जसले गर्वसाथ “परमेश्‍वरले यसरी वा त्यसरी कार्य गर्नुहुन्न” वा “परमेश्‍वर यस्तो वा त्यस्तो हुनुहुन्छ” भन्न मन पराउँछन्—के उनीहरू अहङ्कारसाथ बोलिरहेका छैनन् र? हामी सबैले जान्नुपर्दछ कि मानिस जो देहबाटको हो, ऊ शैतानद्वारा भ्रष्ट पारिइएको छ। मानवजातिको आफ्नै स्वभाव परमेश्‍वरको विरोध गर्ने हुन्छ। मानवजाति परमेश्‍वरको बराबरी हुनै सक्दैन, परमेश्‍वरको कार्यमा मानवजातिले सल्लाह दिने कुरा त परै जाओस्। परमेश्‍वरले मानिसलाई कसरी डोऱ्याउनुहुन्छ भन्ने विषय चाहिँ यो परमेश्‍वर आफैले गर्नुहुने कार्य हो। मानिसले यो वा त्यो विचार व्यक्त नगरी अधीनमा बस्नु नै उचित हुन्छ, किनकि मानिस धुलो मात्र हो। परमेश्‍वरको खोजी गर्ने हाम्रो अभिप्राय भएकोले हामीले परमेश्‍वरले विचार गरून् भनी उहाँको कार्यमा आफ्ना विचारहरू माथिबाट थोप्नुहुँदैन, हामीले जानीजानी परमेश्‍वरको कार्यको विरोध गर्न आफ्नो भ्रष्ट स्वभावलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने कुरा त परै जाओस्। के त्यसले हामीलाई ख्रीष्ट-विरोधीहरू बनाउँदैन र? त्यस्ता मानिसहरूले कसरी परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न सक्छन्? हामी परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनी विश्‍वास गर्दछौं, र हामी उहाँलाई सन्तुष्ट पार्न र उहाँलाई हेर्न चाहन्छौं, त्यसैले हामीले सत्यको बाटो खोज्नुपर्दछ, र परमेश्‍वरसँग उपयुक्त हुने बाटोको खोजी गर्नुपर्छ। हामी उहाँसँग हठपूर्ण विरोधमा खडा हुनुहुँदैन। त्यस्तो कार्यबाट सम्भवतः के भलाइ हुन सक्छ र?